Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : March 2008
Tabaung festival (march)
The last month of the myanmar calendar falls in march. Tabaung isamonth
of the pagoda festivals. Shwedagon Pagoda festival is one of the highlights of
the season in Yangon. . Tabaung festival is marked by the building of sand stupas.
တီးမှူတ်တဖုံ လူမျိူးစုံ သဲပုံစေတီပွဲ။
Festive building and paying respects
To the miniature pagodas of sand.
Posted by Junior Win at 7:30 AM No comments:
၁၂၄၀-ခုသတင်းကျွတ်လဆန်း-၆-ရက် အင်္ဂါနေ့-၂-ချက်တီးကျော်တွင်မင်းတုံးမင်း နတ်ရွာစံသော်၊မိဖုယားခေါင်ကြီးမဟုတ်သော်လည်းဆင်ဖြူရှင်တော်ကိုပေးသနား ကာမိဖယားခေါင်ကဲ့သို့မြှောက်စားထားသည်ရှင်ဖြူရှင်မရှင်အလယ်နန်းမတော် ဘုရားသည်မင်းတုံးမင်းမကျန်းမာစဉ်ကပင်၊အဆောင်တော်ပိတ်ပြီးကုသခဲ့၏။အခြား မိဘုရား-၃၈-ပါးကိုဝင်ခွင့်မပြုရုံမကကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်းရွှေပြည်ဝန်မင်းဦးဖိုး လှိူင်၊ တိုင်တားမင်းကြီးဦးဖိုးဘိုနှင့်တိုင်ပင်ကာတိုင်းပြည်ညိမ်ရန်အတွက် မက္ခရာမင်း သားကြီးကအစသီဘော၊သာဂရ၊ရခိုင်၊ပျဉ်းမလွန်စတသာမင်းသားတို့အထိသား တော်အားလုံးကိဖမ်းထားလိုက်၏။
မင်းတုံးမင်းနတ်ရွာစံပြီးနောက်မိဖုယား ၄၉ ပါး သား ၅၀ ပါး မြေးထီး ၃၈ ပါး မြေးမ ၄၅ ပါး
မင်းတုံးမင်းနတ်ရွာစံလျှင်အိမ်ရှေ့မင်းသားသီပေါမင်းသည်နန်းတော်သို့ပြောင်း၍စံပြီး နန်းသိမ်း၏။မောင်မောင်တုတ်ကိုနေ့ညမပြတ်ခေါ်ထား၏။မောင်ဖေငယ်နေမကောင်း သဖြင့်အိမ်ပြန်အိပ်စေပြီးနံနက်ညီလာခံတက်စေ၏။
မောင်ဖေငယ်ကိုရွှေတိုက်စိုးအရာနှင့်တောင်သမာန်နယ်စားစီးတော်မြင်းဝန်အဖြစ်သူ ကောင်းပြု၏။ဒိုင်းဝန်မင်းကိုအတွင်းဝန်ပုဂံမြို့စားပေး၏။ဒိုင်းအတွင်းဝန်၏ဘခင် လန်းပတ်မင်းကြီးအားဝန်ကြီးခန့်၏။
မောင်မောင်တုတ် မင်းညီမင်းသားအခွင့်အရေးရပြီး ရနောင်မြိုကကိုစားစေကာ
လက်သုံးတော်ကိုင်မြောက် ဓါးဝယ်ဗိုလ်ကြီးဖြစ်၏။ရွှေနန်းရှင်အားပူးတွဲ၍သာခစား ကြ၏။
၁၂၄၀ ခုနှစ်တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်န့တွင်မဟေသီ ဘိသေကသဘင်
ဆင်ယင်ရာ ဆင်ဖြူရှင်ကသီပေါမင်းအားသူ၏ သ္မီးတော်ကြီး မိုးနောင်စုဖယားကြီးနှင့် လက်ထပ်ရန်စီစဉ်နေစဉ်တွင် မင်္ဂလာအခါတော်ကျချိန်၌ မိုင်းနောင်စုဖယားကြီးနှင့် သီပေါတို့ထိုင်ရာအမရာသနပလ္လင်ပေါ်သို့မြတောင်မြို့စား စုဖရားလတ်ကတက်ကာ ကြားထဲမှဇွတ်ဝင်ထိုင်သဖြင့် တချန်တည်းပင်သီပေါကိုယ်တော်သည်မိဖုရားနှစ်ပါးနှင့် လက်ထပ်ပြီးသားဖြစ်သွား၏။
သီပေါသည်စုဖယားလတ်နှင့်သာလျှင်ပေါင်းသင်းနေရပြီး စုဖုယားကြီးထံသို့သွားခွင့် မရ။
(စုဖယားလတ်သည် ဘုရင် မိဖုယားများများယူသည့်စနစ်ကိုတော်လှန်သည်။)
၁၂၄၀ ခု တပို့တွဲလဆန်း ၁၀ ရက်နေ့ညတွင်ယခင်ကဘမ်းထားသည့်မင်းသားများ
အရာရှိများ သားသမီးများပါမကျန် လူ ၅၀ ခန့်ကိုမောင်မောင်တုတ်ကသီပေါမသိဘဲ
နောက်ကိလက်သုံး တော်များ ၀န်ကြီးများနှင့် အတွင်းဝန်များ မသိကြဘဲ
ထို့နောက် ရာဇပဝေသ ဘိသိတ်သွန်းပြီးသီပေါကမင်းစုဖုယားလတ်ကိုမိဖရားခေါင်ထီး ဆောင်းမင်္ဂလာမဟာဥကင်ဖွင့်၍လုပ်ရာ ကညာခင်ခင်ကြီးသည်ဘိသိတ်တော်ဆက်အ
တနေ့တွင်သီပေါကမောင်တုတ်နှင့်မေါင်ဖေငယ်ကိုခေါ်ကာဒိုင်းခင်ခင်ကိုနန်းရမိဖရား မြှောက်လိုသည်ဟုပြော၏။ဒိုင်းခင်ခင်ကိုသူစံရာပန်းခုံတော်သို့ခေါ်ပေးရန်ဆိုရာမောင် ဖေငယ်သည်နှစ်မကောင်းစားသည်ကိုမြင်လိုသည်ကတကြောင်း သခင့်ကိုသစ္စာမ
ဖောက်လို၍တကြောင်း ဒိုင်းခင်ခင်ကိုခေါ်ထုတ်ကာသီပေါထံသို့ပို့ပေ။မကြာခဏ ယောင်္ကျားလိုဝတ်ပြီးသီပေါထံသို့ခေါ်ပေး၏။
နောက်ဆုံးတွင်မိဖရားလတ် မိဖရားခေါင်ကြီးသိသွား၏။ဒိုင်းခင်ခင်ကိုမြောက်ရွှေရေး ဆောင်တွင်မိဖရားအဖြစ်ထားရန် စီစဉ်လျက်ရှိစဉ်တွင်သီပေါမင်းမမာဖြစ်၏။မိဖရား ကြီးကအတွင်းဝန်များနှင့်တိုင်ပင်ရာရွှေသေတ္တာ(ပစ်စာ)တွင်းမှမောင်တုတ်မိန်းမများ
များယူပုံ ရမ်းပုံများကိုတိုင်သောစာနှင့်ဒိုင်းခင်ခင်ကြီးနှင့်မျှကာရနောင်မောင်တုတ်ကို နန်းဝင်ရန်ဒိုင်းဝန်ကတော်ကလုပ်ကြံသည်ဟုစာများတွေး၏့ရပြီးမောင်မောင်တုတ်
ရနောင်မောင်မောင်တုတ်ကိုသတ်စေ အမိန့်ပေးသော်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ် သေသွား၏။ဒိုင်းဝန်နှင့်ဒိုင်းဝန်ကတော်တို့ကိုကွပ်မျက်လိုက်ကြ၏။
မောင်ဖေငယ်ကိုဗန်းမော်ဝန်ကထုတ်ကာဗန်းမော်သို့ခေါ်ပြီးသတ်၏။အသတ်ခံရ ချိန်တွင်ဒိုင်းခင်ခင်တယောက်မိဖရားဖြစ်နေပြီဟုယူဆနေသည့်မောင်ဖေငယ်သည်- ချစ်ရသူခင်ခင်ငယ့်-ချီတေးထပ်ကိုရေးကာရဲဝံ့စွာသေပွဲဝင်သွား၏။
Posted by Junior Win at 7:59 PM 1 comment:
Maung Yit and Junior Win
မောင်ရစ် နှင့် ဂျူနီယာဝင်း အမွှာမောင်နှမ မွေးနေ့ အမှတ်တရ
Posted by Junior Win at 4:54 AM No comments:
Burma Singer – Sai Htee Saing(1940-2008)
The famous Burma Singer, Sai Htee Saing (Shan Nationality)
has passed away at the age of 58.
He sang hundreds of own tune songs in both shan and myanmar languages.
All his fans in Burma and also round the world
now feel so sad after hearing the lost of their star.
ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးစိုင်းထီးဆိုင်
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးရတာ ဒီတခါနောက်ဆုံးဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တယ်အချစ်ရယ်
ကြင်နာချစ်စကားပြောတာ ဒီတခါနောက်ဆုံးဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တယ်အချစ်ရယ်
နေပါဦးလို့ မပြောတောင်မှ နားလည်တယ်
ကိုယ်လဲပဲ ဘယ်ခွဲရက်မှာလဲ တွေ့မြင်ချစ်စ အချိန်မှာ
ခုလို နောက်ထပ်တခါ မတွေ့မှာကို စိုးတယ်
နေချင်ပေမယ့်လဲကွယ် မနေနိုင်တော့ဘူး အချစ်ရယ်
မခေါ်ချင်ပေမယ့်လဲကွယ် မခေါ်ပိုင် မခေါ်ဝံ့ဘူးကွယ် အချစ်ရယ်
ခုလိုနောက်ထပ်တခါ မတွေ့မှာကို စိုးတယ်
ကိုယ်ကအဝေး ဘယ်လောက်ဝေးနေ ဘယ်လောက်ဝေးလည်း
စိတ်မှာတော့ ချစ်သူထံ အမြဲကျန်နေရစ်တယ်
Posted by Junior Win at 4:20 AM 1 comment:
Posted by Junior Win at 5:55 PM 1 comment: